Iindaba -Iinkokheli zehlabathi zifumana i-COVID-19 shots isitofu esenziwe yi China
Impompo yokuTyisa ngaphakathi
IiSetingi zokondla ngaphakathi
Impompo Sebenzisa uVet
Iinkokeli zehlabathi zifumana i-COVID-19 yezitofu zokugonya ezenziwe yi China
Inani lamazwe, kubandakanya i-Egypt, i-UAE, iJordani, i-Indonesia, iBrazil kunye nePakistan, zigunyazisile izitofu ze-COVID-19 eziveliswa yi-China ukuze zisetyenziswe ngokungxamisekileyo. Kwaye amazwe amaninzi, kubandakanya i-Chile, iMalaysia, iPhilippines, iThailand neNigeria, bayalele izitofu zaseTshayina okanye bayasebenzisana ne China ekufumaneni nasekukhupheni izitofu.
Makhe sijonge uluhlu lweenkokheli zehlabathi ezifumene imipu yokuthintela amaTshayina njengenxalenye yephulo labo lokugonya.
Umongameli waseIndonesia uJoko Widodo
Umongameli wase-Indonesia u-Joko Widodo ufumana isitofu sokugonya se-COVID-19 esenziwe yinkampani ye-biopharmaceutical yase-China u-Sinovac Biotech e-Presidential Palace eJakarta, e-Indonesia, Jan 13, 2021. Umongameli ngowokuqala e-Indonesia ukugonyelwa ukubonisa ukuba isitofu sikhuselekile. [Ifoto / Xinhua]
I-Indonesia, ngokusebenzisa i-Arhente yoLawulo lwezoKutya kunye nokuTya iziyobisi, ivume isitofu sokugonya se-China Sinovac Biotech sika-COVID-19 ukuze sisetyenziswe ngoJan 11.
Iarhente ikhuphe isigunyaziso sokusetyenziswa ngokungxamisekileyo kwisitofu emva kweziphumo zethutyana zokuvavanywa kwelizwe emva kwexesha kubonise ukusebenza kweepesenti ezingama-65.3.
Umongameli waseIndonesia uJoko Widodo nge-13 kaJanuwari ka-2021, wafumana ugonyo lwe-COVID-19. Emva kokuba umongameli, inkosi yomkhosi wase-Indonesia, umphathi wamapolisa kuzwelonke kunye noMphathiswa Wezempilo, phakathi kwabanye, bagonyiwe.
Umongameli waseTurkey uTayyip Erdogan
Umongameli wase-Turkey u-Tayyip Erdogan ufumene ifoto yesitofu sokugonya i-Sinovac's CoronaVac coronavirus isifo kwi-Ankara City Hospital e-Ankara, Turkey, Jan 14, 2021. [Ifoto / Xinhua]
I-Turkey yaqala ukugonyelwa i-COVID-19 ngoJan 14 emva kokuba abasemagunyeni bevumile ukusetyenziswa gwenxa kweyeza lase-China.
Ngaphezulu kwama-600,000 abasebenzi bezempilo eTurkey bafumene idosi zabo zokuqala ze-COVID-19 shots eziphuhliswe yi-Sinovac yase China ngeentsuku ezimbini zokuqala zenkqubo yokugonya yelizwe.
Umphathiswa Wezempilo wase-Turkey u-Fahrettin Koca nge-Jan 13, 2021, ufumene isitofu sokugonya i-Sinovac kunye namalungu ebhunga lezenzululwazi lase-Turkey, kusuku olunye ngaphambi kokuba kugonywe ilizwe lonke.
I-Sekela Mongameli ye-United Arab Emirates (i-UAE), iNkulumbuso kunye noMlawuli wase-Dubai USheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Nge-3 ka-Novemba ngo-2020, u-Nkulumbuso kunye no-Sekela-Mongameli we-UAE kunye nomlawuli wase Dubai u-Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum wathumela umfanekiso wakhe efumana ifoto yesitofu sokugonya se-COVID-19. [Ifoto / HH Sheikh Mohammed's Twitter account]
I-UAE ibhengeze nge-9 kaDisemba ngo-2020, ukubhaliswa ngokusemthethweni kweyeza lokugonya le-COVID-19 eliphuhliswe liQela lezeMithi laseTshayina, okanye iSinopharm, igosa leendaba leWAM lisemthethweni.
I-UAE yaba lilizwe lokuqala ukubonelela ngogonyamelo oluphuculweyo lwe-COVID-19 lwesiTshayina kubo bonke abemi nabahlali simahla, ngoDisemba 23. Uvavanyo e-UAE lubonisa ukuba isitofu sokugonya saseTshayina sibonelela ngokusebenza kweepesenti ezingama-86 ngokuchasene nosulelo lwe-COVID-19.
Isitofu sokugonya sanikwa iSigunyaziso sokuSetyenziswa ngokuNgxamisekileyo ngo-Septemba yi-ofisi yezempilo ukukhusela abasebenzi abaphambili emngciphekweni we-COVID-19.
Uvavanyo lwesigaba III kwi-UAE lubandakanye amavolontiya angama-31,000 avela kumazwe ayi-125 nakwimimandla.
Ixesha Post: Jan-19-2021
Iziko leMetro le-6R laMazwe ngaMazwe, i-3 Shilipu, iSithili saseChaoyang, eBeijing, 100025, China